Celegroup1975, Author at Celegroup - Page 164 of 176
Articles by Celegroup1975
မ မက် ရဲရင် မ တွေး ရဲဘူးတွေးတောင် မတွေးရဲဘူးဆိုရင်သေချာတယ် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး
February 10, 2021 Celegroup1975 0
မ မက် ရဲရင် မ တွေး ရဲဘူးတွေးတောင် မတွေးရဲဘူးဆိုရင်သေချာတယ် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်မက်မက်ဖူးလား?သူများဖုန်းလေးကိုင်တာတွေ့တော့လက်လေးကိုဖုန်းလေးလုပ်ပြီး စကားပြောနေသလိုလုပ်ဖူးလား? တချို့ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆရာဝန်လိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးဆော့တယ်။ တချို့ကကိုယ့်ကိုကိုယ် စွန်းဝူခုန်း လိုစိတ်ကူးယဉ်တယ်။တချို့က မုန့်လေးတစ်မျိုးကို ငါကြီးလာရင် ကြိုက်သလောက်ဝယ်စားမယ်ဆိုပြီး ကျိမ်းခဲ့ဖူးတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသား၊ မင်းသမီးနေရာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်အစားထိုးပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဖူးလား?Super Hero တစ်ယောက်ယောက်ကိုအသေကြွေပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဖူးတယ်။ အိပ်မက်မက်ဖူးတယ်။ Spider Man လိုလက်လေးလုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် Spider Man လိုစိတ်ကူးယဉ်တဲ့သူရှိတယ်။နန်းလိုငယ်ငယ်တုန်းက […]
တဈကယျအဖွဈပကျြလေးပါ တဈကယျအဖွဈပကျြလေးပါ ဖာခေါငျးမြားသို့ပေးစာ ယခုခတျေ လူငယျ ကြား/မ မရှေး ပွီးဆုံးအောငျဖတျပေးကွ​စလေိုပါတယျ​​နျော​. a´ ” ဟြောငျ့ ငါ့စျောဆီကအဖွရေပွီကှ “b´ ” ဟုတျလား ” Congrats သားကွီးတဈဝိုငျးတော့လုပျလိုကျတော့ လအနညျးငယျအကွာ……bဟြောငျ့ မငျးစျောနဲ့ ဘယျအခွအေနရေောကျနပွေီလဲ ” ပွောစမျးပါဦး ”aဒီလိုပါပဲကှာ ” အဆငျပွပေါတယျ ”bငါမေးတာက ဟိုဟာဒီဟာလုပျပွီးပွီလားa[…]
အဓိက ဦးတညျခကျြ မပြောကျဖို့ပဲ အရေးကွီးတယျနျော။
အဓိက ဦးတညျခကျြ မပြောကျဖို့ပဲ အရေးကွီးတယျနျော။ ခနဲ့တာတှေ ရှဲ့တာတှေ၊ လှောငျပွောငျ ဟားတိုကျတာတှေ၊တဈဖကျလူကို ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျး ဆဲဆိုတာတှဟော”အမှနျတရား” နဲ့ သငျ့​ကို ပိုပွီး ဝေးသှားစတေယျ။ လူတှေ စိတျခံစားခကျြ သဘာဝအရမှားနတောတှရေ့ငျ ကဲ့ရဲ့ခငျြမယျ။ ​ဆဲဆိုခငျြမယျ။ အရိုငျးဆနျခငျြမယျ။ ရှုံ့ခခြငျြမယျ။ ဒါတှဟော အကြိုး လုံးဝ မရှိရုံတငျ မကဘူးစိတျရဲ့ လှတျလပျမှု နဲ့ ဆနျ့ကငျြနတေဲ့စရိုကျလက်ခဏာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ မဆဲဘဲ၊ မရိုငျးဘဲ၊ အဆငျ့ရှိရှိ ပွောတဲ့ သူဟာကွောကျတတျ […]
” တန်ဖိုး “
” တန်ဖိုး ” တစ်ခါတုန်းက စာရေးကရိယာရောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ အချိန်က ကျောင်းဖွင့်ခါနီးမို့ ကျောင်းသားမိဘတွေက သူတို့သားသမီးတွေအတွက် စာရေးကရိယာတွေလာဝယ်ကြတာပေါ့။ ညရောက်တဲ့အခါ စာအုပ်တွေအားလုံး ရောင်းလို့ကုန်ပေမဲ့ စာအုပ်လေးနှစ်အုပ် ကျန်ခဲ့လေသတဲ့။ တစ်အုပ်က အသားကောင်းတဲ့စာအုပ်အကောင်းစား၊ တစ်ခြားတစ်အုပ်ကတော့ စာရွက်အသားညံ့တဲ့ အပေါစားဗလာစာအုပ်လေးပေါ့။ ညရောက်တော့ ဆိုင်ရှင်က အဲ့စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်ကို ပူးထားပြီး ဗီရိုပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်။ စာအုပ်လေးတွေက ညရောက်တော့ စကားပြောကြတယ်။ အရင်ဆုံးစာရွက်အသားကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးကပြောတယ် “ငါကတန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်ဆိုတော့ ငါ့ကိုလည်း အဆင့်အတန်းရှိတဲ့သူပဲ လာဝယ်မှာပါ”တဲ့။ […]
“မေတ္တာစစ်ရင် စူးပါတယ် “
“မေတ္တာစစ်ရင် စူးပါတယ် ” ဘယ်တော့မှ နားမလည်နိုင်ပါဘူး တချို့ယောက်ျားတွေဟာ ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဘာကြောင့်များ စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုမူဆက်ဆံသလဲ တန်ဖိုးမထားသလဲ မလိုအပ်သလဲဆိုတာကို။ ကိုယ့်အတွက်ဆို ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိတဲ့ မိန်းမကိုယ်နဲ့ဆို ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် လက်တွဲမဖြုတ်ဘူးဆိုတာသေချာနေပြီးသား မိန်းမ စားဖို့ ထမင်းတစ်ပန်းကန်တည်းရှိရင်တောင် အဲ့ဒီတစ်ပန်းကန်ကို ကိုယ့်ကိုပဲကျွေးမယ့်အထိ ချစ်တတ်တဲ့မိန်းမ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်ထိ ပေးဆပ်ရဲ ချစ်ပြရဲမှန်း သိနေတဲ့ မိန်းမကို ဘာလို့များ တန်ဖိုးမထားပါလိမ့်ပေါ့ ဒီမိန်းမအပြင် […]
“ဆဲတဲ့အကျင့်လေးတွေ ပျောက်နိုင်ကြပါစေ” “ပါးစပ်က ထွက်သော ထိုစကားကြောင့် “တဲ့။တစ်ခါက ရဟန္တာထေရီမကြီးနှစ်ပါးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ပါးက မေးတယ်။အသက်ကလည်း ငယ်တယ်၊အရွယ်လည်းရှိပါရဲ့နဲ့ဘာ့ကြောင့်အိမ်ထောင် မပြုတာလဲ?ဆိုတော့တစ်ပါးက သူ့ဇာတ်ကြောင်းကို ပြောပြတယ်။ သူဟာ ဘဝတစ်ခုမှာကုန်သည်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ပေါင်းသင်းပြီး မကြာခင်မှာဘဲ ယောင်္ကျားကကုန်ကူးသွားတော့ သူ့မှာ ကိုယ်ဝန်နဲ့ကျန်ခဲ့တယ်။ ယောက္ခမတွေက သူ့သားနဲ့ ရတဲ့ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး နှင်ချလိုက်တယ်။ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ထွက်သွားခဲ့ရတယ်။ဇရပ်တစ်ခုရောက်တော့ ဗိုက်နာပြီးကလေးမွေးတယ်။ ကလေးကို ဇရပ်မှာ ခဏထားပြီးရေသွားရှာနေတုန်း ခရီးသွားတစ်ယောက်ကစွန့်ပစ်ထားတဲ့ ကလေးဆိုပြီး ယူသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ စိတ်လေပြီး လျှောက်သွားနေတုန်းဓားပြဗိုလ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီး ပေါင်းသင်းခဲ့ပြန်တယ်။ […]
“သောကစက်ဝန်းဗဟိုချက်” စိတ်သောကများနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ဆရာဖြစ်သူတို့ စကားပြောနေကြတယ်။”တပည့်…မင်း ဘာတွေဖြစ်နေလဲ” “ကျွန်တော့်ဘဝက အဆိုးတွေချည်းပဲမို့…စိတ်ဓာတ်တွေ ဟိုးအောက်ဆုံးအထိ ကျနေတယ်ဆရာကြီး” “လောကသဘောအရ အကောင်းချည်းကြုံနေသူအဆိုးချည်းကြုံနေသူဆိုတာ မရှိပါဘူးကွာ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ကောင်းတာကြုံရင် သိမြင်တတ်ဖို့နဲ့သာယာယစ်မူးမလွယ်အောင် သတိထားဖို့ လိုသလိုမရည်ရွယ်ပါဘဲ အဆိုးတွေကြုံနေရင်လည်း ကိုယ်ကအဆိုးတွေ ထပ်ကြုံအောင် မလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့” “အဖေကလည်း မကောင်းဘူး။ နောက်အိမ်ထောင်ကိုပဲအလေးထားတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး။” “အနည်းဆုံးတော့ တပည့်မှာက အဖေခေါ်စရာ သက်ရှိထင်ရှားရှိပါသေးတယ်ကွာ။ ဆရာတို့ဆို အဖေ့ကိုအောက်မေ့လို့၊ စကားလေးတစ်လုံးနှစ်လုံးလေးပဲ ပြောချင်ပါတယ်ဆိုရင်တောင် ပြောခွင့်မရတော့ပါဘူး။” […]
” သမီးပြန်အလာ မမျှော်နဲ့တော့အမေ ” အိမ်ကမထွက်ခင်မှာအမေဟာ မှာတမ်းခြွေတယ်….။\_ “ငါ့သမီးဂရုစိုက်နော် မေမေ စိတ်ပူတယ်” တဲ့….. ဆိုင်ကယ်ဦးထုတ်လေးက မေမေ့အကာအကွယ်ပါပေါ့…..။ ဘယ်သူက ထင်ထားမှာလဲ မေမေ….. ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကို…. ရေပိုက်တွေ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ဖြိုခွဲကြမယ်လို့…. သမီးတို့က စည်းကျော်လာကြတာလည်းမဟုတ်…. အကာအကွယ် ယူလိုက်တာတောင် ….. သမီးကိုထိအောင်ပစ်ကြတယ် မေမေ…. နေတောင်ညိုရောပေါ့….. သမီးပြန်အလာ မျှော်နေတဲ့မေမေ…. အရိပ်လေးတောင် မတွေ့ရတဲ့အခါ….. ရင်ထဲလှိုက်ဖိုငိုကြွေးနေမလား…. ဒါမှမဟုတ် ….. […]
February 9, 2021 Celegroup1975 0
သူငယ်ချင်း ငါတို့ကနင့်ကို RIPဆိုပြီး ဂုဏ်ပြုချင်တာမဟုတ်ဘူး ။ ငါတို့လုပ်ဘူးခု့တဲ့ ကုသိုလ်နဲ့ နင်အမြန်ဆုံးသက်သာဖို့ မျော်လင့်နေပါတယ်…။ သူငယ်ချင်း အရာအားလုံးအတွက် အားတင်းထားပါနော်….ငါတို့တစ်တွေ အရင်လိုပြန်ဆုံချင်သေးတယ်ဟာ….။ဒုတိယ မိသားစုဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းရေ…..။ သေမင်းတံခါးဝက ပြန်လာပေးပါနော်….။ ငါတို့တစ်တွေနင့်ကို အားလုံးမျော်နေတယ် အားတင်းထားပါနော်….။ ငါတို့တွေ အားလုံးအတွက် အသက်ဆက်ရှင်ပေးပါနော်…။crd unicode သူငယျခငျြး ငါတို့ကနငျ့ကို RIPဆိုပွီး ဂုဏျပွုခငျြတာမဟုတျဘူး ။ ငါတို့လုပျဘူးခု့တဲ့ ကုသိုလျနဲ့ နငျအမွနျဆုံးသကျသာဖို့ မြျောလငျ့နပေါတယျ…။ သူငယျခငျြး အရာအားလုံးအတှကျ […]
“ပုဒ်မ ၁၄၄ အကြောင်း သိကောင်းစရာ”
“ပုဒျမ ၁၄၄ အကွောငျး သိကောငျးစရာ” “ပုဒျမ ၁၄၄ ဆိုတာ” ပုဒျမ-၁၄၄-ရဲ့ အမိနျ့အာဏာမှာ ထိထိရောကျရောကျ အရေးယူပိုငျခှငျ့တှေ ရှိနတေယျ ။ လူ( ၅ ) ဦး ထကျ မစုရဆိုတဲ့ အမိနျ့ကို သာမနျပွညျသူတှေ သိကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဒီ့ထကျပို လို့မသိနိုငျကွပါဘူး။ တဈကယျလို့ လူစုဘာလုပျရမှာလဲဆိုတဲ့ ဥပဒပွေဋ်ဌနျးခကျြတှေ ရှိနတေယျ ။ ပဋိပက်ခ အဓိက ရုဏျးနှိမျနှငျးရေးလကျစှဲ ဥပဒစောအုပျကို ရဲ အရာရှိတှသော […]
အပြစ်တင်ခြင်းထက် အရေးကြီးသော အရာများ ကျွန်တော့်အမေက ဟင်းချက်အရမ်းကောင်းတယ်ဗျ။ အမြဲတမ်းလည်းပဲ စားလို့ကောင်းမယ့် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေးတွေ ချက်လေ့ရှိတယ်။ တစ်ညနေမှာတော့ အမေဟင်းချက်တာ အရမ်းတူးနေတယ်ဗျာ။ မသိမသာလေး တူးနေတာမဟုတ်ဘူး။မြင်ရုံနဲ့တင် တူးနေမှန်း သိရလောက်အောင်ကို တူးနေတာ။ တူးနံ့တွေလည်း ထွက်လို့ပေ့ါ။ ကျွန်တော်လည်း ညနေစာ ထမင်းဝိုင်းမှာ အဖေဘာပြောမလဲဆိုတာ စိုးရိမ်ရင်းပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် အဖေက ကျွန်တော် ထင်ထားသလို မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဖေဟာ တူးမှန်းသိရက်ကြီးနဲ့ ဟင်းတွေကို ခါတိုင်းလိုပဲ မြိန်ရေရှက်ရေ စားလိုက်တယ်။ […]
ဖိနပ်စုတ်လောက်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာ တနေ့မှာတောသားတစ်ယောက်ဈေးမှာ ဈေးဝင်ဝယ်ဖို့ လာရင်း မိုးကလည်းရွာထားတော့ သူ့ဖိနပ်ကပြတ်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့အိတ်ထဲက စက္ကူလေးနဲ့ထုတ်ပြီး ယူလာခဲ့တယ် ဈေးအဝင်ဝက ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်တော့ဆိုင်ရှင်ကိုခေါ်ပြောလိုက်တယ်အစ်မကြီး ကျွန်တော့ ဖိနပ်လေး ခဏထားခဲ့လို့ ရမလား ဈေးလာရင်း ဖြတ်သွားလို့ပါ ကျွန်တော် ဈေးကအပြန်ဝင်ယူပါ့မယ် “အစ်မကြီးက”အေးငါ့မောင် ဒီနားမှာထားခဲ့လိုက်ဟုတ်အစ်မဒါနဲ့ ဈေးဝယ်ပြီးတာနဲ့ သူဖိနပ်လေးဝင်ယူခဲ့တယ်အစ်မကျွန်တော့ ဖိနပ်လေး ယူသွားတော့မယ်ခင်ဗျ အေးအေးယူသွားလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်မအစ်မက အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲအေးရပါတယ်ကွယ်တို့တွေက လူသားတွေပဲဒီလိုကူညီပေးရတာ အပန်းမကြီးပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်မကျွန်တော့ကို သွားခွင့်ပြုပါအုံးအေးပါအေးပါနောက်လည်း အကူအညီလိုရင်ပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်မ ဒီလိုနဲ့ တောသားလည်း ရွာကို ပြန်သွားခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်နေမှာတော့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ […]